Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Caadiga Ahaa Ee Faraca Iftin oo Xagardheer Kaqabsoomay.
Shirkii Caadiga Ahaa Ee Faraca Iftin oo Xagardheer Kaqabsoomay.
Maanta oo taariikhdu ay kubeegantahay 25/3/18 waxaa xerada qoxootiga Xagardheere kaqabsoomay shirkii caadiga ahaa ee faraca Iftin, kaas oo bishiiba mar qabsooma.
Shirka ayaa furmay galinkii hore ee maanta oo Axad ah waxaana lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay sheekh Axmed Sh Xuseen oo kamid ah culimo owdiinka ree Ogadenia ee kudhaqan wadankan Kenya.
Shirkan oo aad loosoo abaabulay ayaa waxaa kasoo qayb galay inta badan xubnaha faraca Iftin, Marti sharaf, mas’uuliyiin iyo taageerayaal aad ubadan, waxaana kulanka laga soo jeediyay khudbado dhaxal gal ah.
Madaxda kulanka soo xaadirtay waxaa kamid ahaa N/hure Maxamuud Sooc, N/hure Cabdulaahi Xaashir iyo mas’uuliyiin kale oo uu kamid yahay gudoomiyaha gudiga qoxootiga Ogadenia mudane Daahir Maxamad Cali.
Mas’uuliyiintan ayaa dhamaan soojeediyay khudbado kala duwan oo lagu diirsaday iyo warbixino kala duwan, waxayna xubnaha lawadaageen xogo kamaqnaa.
Guntii iyo gunaanadkii gudoomiyaha Faraca Iftin halgame Xaaji Cabdi Nuur ayaa khudbad dheer kusoo xidhay kulanka wuxuuna kusoo xidhay si qurux badan.